शाकाहारीले खानै पर्ने खानेकुराहरू यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
Up Next किन हुन्छ महिलाको स्वर मसिनो र सुरिलो ? पुरुषको चाहि किन मोटो र धोद्रो ? थाहापाउनुहोस्
१. खानामा के खाने, के नखाने मात्र होइन कसरी खाने भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ । हामीले खानेकुरा खादाँ केही शिष्टाचार…